पोखरामा बेखर्ची भएका पारसले जव म्यानेजरलाई मु क्का ब’र्सा’ए…. – Online Saptarangi
October 17, 2020 Prakash WaibaLeaveaComment on पोखरामा बेखर्ची भएका पारसले जव म्यानेजरलाई मु क्का ब’र्सा’ए….
काठमाडौ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका बालसखा प्रभाकर राणालाई जब पारसको खबरले झ’स्का’यो, तब उनी स्त’व्ध भए । प्रभाकरले सोचेका थिएनन्, पारस अहिले पनि कोहीमाथि जा’इ’लाग्छन् ।
फोनमा यति–उति पैसा भन्ने तय भएको थिएन, पारसले पनि सोधेनन् । सीधै लेकसाइडस्थित फिस्टेल लजको काउन्टरमा पुगे । त्यहाँ थिए, म्यानेजर । पारसलाई देख्नेबित्तिकै उनले एउटा कागजमा बे’रे’र राखिएको मु’ठो दिए ।
पारसले कागज खोलेर हेरे, एक–एक लाखको दुईवटा गड्डी देख्नासाथ मुख बिगारे । अनि, आफूमाथि अ’प’मा’न भएको भन्दै म्यानेजरलाई मु क्का ब’र्सा’उन थाले । उनको नाकबाट र ग त बग्यो । पारस पैसा त्यहीँ फ्याँ’के’र निस्किए । अनि, म्यानेजरले प्रभाकरलाई फोनमा यस्तो घटना सुनाए । सुन्नासाथ प्रभाकरले मुख बिगारे, तर जवाफ दिएनन् । किनभने, उनले फोन रिसिभ गरिरहँदा अगाडि पञ्चायतकालिन दुई जना मन्त्री थिए । त्यसपछि प्रभाकर केही पर, एकान्तमा पुगे ।
लगभग १०–१५ मीनेट कोहीसँग फोनमा कुरा गरेर साथीहरू भएको ठाउँमा फर्किए । त्यसबेलासम्म पनि उनको अनुहार राम्रोसँग खुल्न सकेको थिएन । त्यहाँ बस्नेहरूको अनुमान थियो– कि त प्रभाकरले ज्ञानेन्द्रलाई फोन गरेर पारसको ह’र्क’तबारे सुनाए । कि, फेरि फिस्टेलमा फोन गरेर पारसले भनेजति पैसा दिन लगाए । जनआस्था साप्ताहिकबाट